Imandarmedia.com.np: यी पूर्वमन्त्री बने नगरप्रमुखका उम्मेदवार, जनताको घरघरमा पुगेर गरे यस्तो बाचा !
Main News, Political » यी पूर्वमन्त्री बने नगरप्रमुखका उम्मेदवार, जनताको घरघरमा पुगेर गरे यस्तो बाचा !
यी पूर्वमन्त्री बने नगरप्रमुखका उम्मेदवार, जनताको घरघरमा पुगेर गरे यस्तो बाचा !
बैतडीको पाटन नगरपालिकामा नेपाली काँग्रेसका तर्फबाट पूर्व सहायकमन्त्री केशवबहादुर चन्द नगरप्रमुखका उम्मेदवार बनेका छन् । पाटन नगरपालिकामा प्रमुखको उम्मेदवार बन्नुभएका उहाँँ नगरपालिकाका बस्तीबस्ती पुगेर घरदैलो गरिरहेका छन्।
चन्दलाई प्रमुखमा छनौट गरेर काँग्रेसले पाटन नगरपालिकालाई प्रतिष्ठाको विषयको रुपमा लिएको सर्वत्र अनुमान गरिएको छ भने आफ्नो राजनीतिक जीवनको अनुभवलाई स्थानीयस्तरमा कार्यान्वयन गर्नका लागि उम्मेदवारी दिइएको उनको भनाइ छ ।
विगतमा पनि आफूले यसै क्षेत्रबाट जनताको प्रतिनिधित्व गरे पनि अहिले स्थानीयस्तरमै जनताको सेवा गर्नका लागि मैले उम्मेदवारी दिएको हु चन्दले भने–“ देशका १० वटा नमुना सहरमध्येको पाटन सहर पाटन नगरपालिकामा केन्द्रीय राजनीतिको अनुभव समेटेर काम गर्छु ।”
यो क्षेत्रको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार,पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारलगायतको विकासका लागि स्पष्ट खाँका छ । सोही खाकाअनुसार आफूले कामसमेत प्रतिबद्घता व्यक्त गरे।
चन्द २०५३ सालको उपनिर्वाचनमा बैतडी क्षेत्र न– १ बाट सासंद भएर महिला बालबालिका तथा समाजकल्याण सहायक मन्त्रीसमेत बन्नुभएको थियो । पूर्व प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्दले बैतडीका दुबै क्षेत्रबाट जितेपछि त्यहाँ भएको उपनिर्वाचनमा उहाँ बिजयी भएका थिए ।
चन्दले आफ्नो उम्मेदवारी नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि भएको बताएका छन् । उनले आफू प्रमुख भएपछि पाउने तलबभत्तालाई पीडित नागरिकको घाउमा मलम लगाउन प्रयोग गर्ने बताए । उनि भन्छन् – “हिजोका दिनमा पनि मैले समाजसेवा गरेको हुँ अव पनि सामाजिक काम गर्नेछु । जनताले मलाई जिताएमा मेरो अनुभवको आधारमा काम गर्नेछु सबै मतदातालाई भोट दिन अनुरोध गर्दै प्रचारमा हिँडेको छु ।”
पाटन नगरपालिकामा पूर्व सहायकमन्त्री केशव चन्दको उम्मेदवारी भए पनि त्यहाँ कडा रुपमा प्रतिस्प्रदा हुने देखिएको छ । सो पदमा नेकपा एमालेबाट कानुनका विद्यार्थी समेत रहेका युवानेता नरेशकुमार विश्वकर्मा प्रतिस्पर्दामा छन् भने (माओवादी केन्द्र) बाट पनि पत्रकार शङ्कर भण्डारी प्रतिस्पर्दामा छन । राप्रपाबाट रणबहादुर विष्ट भिड्दैछन ।
२०७४ असार ११ मा प्रकाशित ।